Posted by yawcommunity at Tuesday, May 17, 20113comments Links to this post
တိပိဋက ယောဆရာတော်ကြီးရဲ့ ၆၇ နှစ် အိုပွဲမင်္ဂလာ
ကျေးဇူးရှင် တိပိဋက ယောဆရာတော်ကြီးရဲ့ ၆၇ နှစ်ပြည့် အိုပွဲမင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ၀ိသုဒ္ဓါရုံကျောင်းတိုက်မှာ ကျင်းပခဲ့တယ်၊ ပင့်သံဃာတော်များ၊သီလရှင်များအား လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ ဧည့်သည်တော်များအား ကျွေးမှုလှူဒါန်းခြင်းနဲ့ တရားရေအေး တိုက်ကျွေးလျှက် အိုပွဲမင်္ဂလာကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်၊ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အိုပွဲမင်္ဂလာ နှလုံးသွင်း သံဝေဂကဗျာကိုလည်း ပြန်လည်ဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ်။
Posted by yawcommunity at Friday, March 05, 20100comments Links to this post
ကိုလံဘို မြန်မာကျောင်းကနေ တနာရီခွဲလောက် ကားမောင်းလိုက်ရင် မိနုဝန်ဂေါဓမြို့ကို ရောက်ပါတယ်၊ ဒီနေ့တော့ မိနုဝန်ကို ရောက်ဖြစ်တယ်၊ ပိဏ္ဍပါတလို့ခေါ်တဲ့ ဆွမ်းခံပင့်လို့ သွားဖြစ်တာပါ၊ သီရိလင်္ကာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလို ဆွမ်းခံတဲ့ အလေ့အထက ပျောက်သလောက်ရှိနေပြီ၊ သံဃာသုံးသောင်းကျော်မှာ ဆွမ်းခံတာ အပါးတစ်ရာ မပြည့်တော့ပါဘူး၊
Posted by yawcommunity at Wednesday, February 17, 20100comments Links to this post
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ စင်္ကာပူနိုင်ငံကို ကြွရောက်လာပါတယ်၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တရုတ်မိသားစုတွေကို အဘိဓမ္မာ ပို့ချပေးဖို့ ကြွလာတာပါ၊ ဆရာတော် ရောက်လာတဲ့ သတင်းကြားတာနဲ့ ဆရာတော့်ခြေတော်ရင်းကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ Lotus Foundation အဖွဲ့တွေနဲ့ အတူပေါ့၊
Lotus Foundation ၊Dhamma Download အဖွဲ့တွေ ဦးဆောင်ပြီး အဝေးရောက် ရွှေမြန်မာများ အဘိဓမ္မာလေ့လာနိုင်ဖို့ Abhidhamma Foundation ကို တည်ထောင်ကြမှာပါ၊ မြန်မာပြည်က အဘိဓမ္မာပို့ချ သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဆရာတော်များ လူဆရာများရဲ့ ပို့ချချက် အသံဖိုင် ရုပ်ဖိုင် စာဖိုင်တွေကို စုစည်းပြီး အွန်လိုင်းမှာ တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီကိစ္စတွေအတွက် ဆရာတော်ဦးနန္ဒမာလာဆီ ရောက်လာခဲ့တယ်၊ ဆရာတော်ရဲ့ ဩ၀ါဒ ဆရာတော်ရဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အကြံအဥာဏ်ကို ရယူကြခြင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်၊
အဘိဓမ္မာပို့ချချက်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုပါ အွန်လိုင်းမှာ စုစည်းတင်ပြပေးတော့မှာမို့ အဘိဓမ္မာစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းတစ်ခုပါ။
နည်းပညာရှင်များရဲ့ အကြံအဥာဏ်ကို ရယူပြီး နောက်ထပ် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာက Online Library သို့မဟုတ် Online University လုပ်ဖို့ပါ၊
ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ အဝေးရောက် စာသင်သားတွေအတွက် ကျမ်းကိုးစာအုပ်တွေလိုအပ်လာရင် လွယ်ကူစွာကြည့်နိုင်ဖို့ Online library မှာ စုစည်းသွားမှာပါ၊ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်အသီးသီးက Buddhist studies နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပို့ချချက်တွေကိုလဲ အတတ်နိုင်ဆုံး ရှာဖွေစုဆောင်းကာ Online Library မှာ စုစည်းတင်ပြနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းလေးတွေကိုလဲ ဆရာတော့်ကိုလျှောက်ထားတင်ပြ ဖြစ်တယ်၊ ဆရာတော်က လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေ အကြံအဥာဏ်တွေချီးမြှင့်ခဲ့တယ်၊ တဆက်တည်းမှာပဲ ဆရာတော်အမိန့်ရှိတာက ပြည်တွင်းမှာ အဘိဓမ္မာလေ့လာလိုက်စားသူတွေအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ဋီကာကျော်မြန်မာပြန်ကို ဒီနှစ်ဝါတွင်းသုံးလမှာ အပြီးရေးမယ်လို့ အမိန့်ရှိသွားပါတယ်၊ ဋီကာကျော်မြန်မာပြန်က ရှိတော့ရှိပြီးသားပါ၊
မြန်မာလိုရေးထားတာကို မြန်မာတွေ သဘောမပေါက်နိုင်ဖြစ်နေလို့ ဒီလိုထပ်ရေးတာပါလို့ မိန့်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကွက်လပ်တစ်ခုကို ဖြည့်စည်းပေးမှာမို့ တကယ့်ကို ကြည်နူးဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်၊
မြန်မာပြည်မှာ တနှစ်ကို မြွေကိုက်လို့ သေဆုံးရတာ လေးထောင်ကျော် ငါးထောင်ကျော်ရှိပါတယ်၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပါ၊ ဘာကြောင့် မြွေကိုက်ပြီး သေဆုံးရတဲ့နှုန်း မြှင့်တက်လာရသလဲဆိုတော့ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး လုံလုံလောက်လောက် မပေးနိုင်တော့လို့ပါပဲ၊(အမှန်ဆိုရင်တော့ လုံးဝကို မပေးနိုင်တော့တာပါ)၊ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး တစ်လုံးကို မြန်မာငွေ ခြောက်သောင်းခွဲ ရှိပါတယ်၊ မြွေကိုက်တဲ့လူနာကို ဆေးခြောက်လုံးလောက်ထိုးပေးမှ ဒီလူနာအသက်ရှင်ပါတယ်၊(သတိပြုရန်။ ။ ပြည်တွင်းမှာတော့ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး အတုတွေပေါ်နေပါတယ်)
အဲဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကို ဖြည့်စည်းပေးချင်လို့ မြွေကိုက်ခံရတာများတဲ့ မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးတွေ လုံလုံလောက်လောက် ရရှိနိုင်ဖို့ Lotus Foundation ညီအကိုမောင်နှမများက လှူဒါန်းနေပါတယ်၊ ဆရာတော်ဦးနန္ဒမာလာကတော့ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်တာကို ဖြည့်စည်းပေးနေတာ သိရတဲ့အတွက် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ သာဓုခေါ်ပါတယ်၊
ပြီးတော့ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးတင် လှူတာမဟုတ်ဘဲ..မြွေမကိုက်နိုင်အောင် မြွေဒဏ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ဖိနပ် အရှည်ကြီးတွေလှူတာ ပညာပေးတာ စသည်တွေလဲ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ကြဖို့ ဩ၀ါဒပေးပါတယ်၊
ပြိးတော့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင် မိသားစုများ တရားနာယူနိုင်ရန် Dhamma centre တွေလဲ ဆောက်ပေးနေပါတယ်၊
စက်ပစ္စည်း အစုံ ဓမ္မစင်တာ တစ်ခုအတွက် သိန်း ၂၀လောက် လှူဒါန်းရပါတယ်၊ လယ်တီဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဖွားရာမြေ စိုင်ပြင်ရွာက စတင်လို့ ဓမ္မစင်တာတွေ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းတာ အခုဆိုရင် ဓမ္မစင်တာ ငါးခုတည်ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ၊ Lotus Foundation ညီအကိုမောင်နှမများရဲ့ စေတနာတွေပါ၊
ဆရာတော်ဦးနန္ဒမာလာကတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုကို သတိထားပြီး First Unity Second Unity Third Unity ဖြစ်ဖို့ ဩ၀ါဒချီးမြှင့်ပါတယ်၊
နောက်ဆုံးမှာတော့ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြိးနဲ့ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ဆရာတော်ကြီးကို ဦးချကန်တော့ကာ ပြန်လာခဲ့တယ်၊ အပြင်ဖက်မှာတော့ စင်္ကာပူရဲ့ ဒီဇင်ဘာက ချမ်းအေးခြင်းမရှိဘဲ အုံ့နွေးနွေးဖြစ်နေတယ်၊ ည ကိုးနာရီထိုးတော့မှာမို့ သွားလာလှုပ်ရှားသူတွေလဲ လျော့နည်းစပြုလုို့ပေါ့၊
လူသားတွေကို တတ်နိုင်သလောက် နွေးထွေးမှုပေးပြီး အားနည်းနေတဲ့ လူတွေကို ကရုဏာနှလုံးသားနဲ့ ကူညီနိုင်ဖို့ အပြန်လမ်းခရီးရဲ့ အတွေးတွေထဲမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မြည်သွားတာကိုလဲ သတိပြုမိလိုက်ပါရဲ့၊
Posted by yawcommunity at Tuesday, December 29, 20090comments Links to this post
ဖြူးဆရာတော်ကြီးအား ရည်စူး၍ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြု
27-11-2009 သောကြာနေ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဓာတ်တော်ကျောင်းတိုက်တွင် ကျေးဇူးတော်ရှင် နိုင်ငံကျော်နယ်လှည့် ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော်ကြီးအား ရည်စူး၍ ဘုရားအမှူးရှိသော သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအား ဆွမ်းသင်္ကန်း န၀ကမ္မ၀တ္ထု လှူဒါန်းခဲ့သလို ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့် ဒေါက်တာ ဥတ္တမသီရိမှ သာသနာတော်အတွက် ဆရာတော်ကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကို ဂုဏ်ရည်တမ်းတ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းနောက်အရှင်တိက္ခဥာဏာလင်္ကာရမှ ရေစက်သွန်းချကာ တပည့်ဒကာ ဒကာမများကကျေးဇူးရှင်ဖြူးဆရာတော်ကြီးအား ကောင်းမှုအစုစုအတွက် အမျှအတမ်းပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။
Posted by yawcommunity at Friday, November 27, 2009 1 comments Links to this post
Lotus Foundation အဖွဲ့ရဲ့ ရဟန်းခံအလှူမင်္ဂလာ
၂၇-၁၁-၂၀၀၉ သောကြာနေ့ Lotus Foundation အဖွဲ့၏ ရဟန်းခံအလှူမင်္ဂလာ အခန်းကို စင်္ကာပူနိုင်ငံ တိုပါရိုး မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စည်ကားစွာ စိတ်တူ ကိုယ်တူကျင်းပခဲ့ကြသည်၊ အခမ်းအနားအစီအစဉ်အဖြစ် ရဟန်းလောင်း ကိုမျိုး(ဩစတေးလျ-Dhammaramsi.net) အား မြင့်မြတ်သော ရဟန်းအဖြစ်သို့ သွတ်သွင်းပေးကြပြီး အရှင်တိက္ခဥာဏာလင်္ကာရ အား ပုနောပသမ္ပဒ သိက္ခာထပ်မင်္ဂလာ ပြုလုပ်ကြကာ ကြွရောက်လာကြသည့် သံဃာတော်များအား လှူဘွယ်ဝတ္ထုနှင့် န၀ကမ္မများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြသည်။ သံဃာတော်များကလည်း ပရိတ်တရားများ ချီးမြှောက်ရွတ်ဖတ် ပေးတော်မူသည်။
အခမ်းအနားအပြီး Lotus Foundation အဖွဲ့ဝင်များ စုပေါင်းကာ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြသည်။
စိတ်တူ ကိုယ်တူပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကုသိုလ်ပွဲ အောင်မြင်ခြင်းအတွက် ၀မ်းမြောက်နုမော် သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်စေရန် ကုသိုလ်အမျှ ပေးဝေအပ်ပါသည်။
Lotus Foundation အဖွဲ့၏ လောက ဘာသာ သာသနာအတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုhttp://www.lotusfoundationmm.orgတွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Posted by yawcommunity at Friday, November 27, 20090comments Links to this post
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဖြူးဆရာတော်ကြီးအား ရည်စူး၍ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်မည်
၂၄-၁၁-၂၀၀၉ အင်္ဂါနေ့ နံနက် (၆)နာရီအချိန် မြန်မာနိုင်ငံ အာရှတော်ဝင်ဆေးကုခန်းတွင် ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူသော ကျေးဇူးတော်ရှင် နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော်ကြီးအား ရည်စူး၍ ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်ဒေါက်တာ ဥတ္တမသီရိ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဆရာတော်ကြီး၏တပည့်သာဝကများ ဓမ္မကျေးဇူးတင်ရှိဖူးသူများ စုပေါင်းကာ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ဓာတ်တော်ကျောင်းတိုက်တွင် သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ရေစက်ချ အမျှအတန်းပေးဝေ ကုသိုလ်ပြုမည် ဖြစ်ပါ၍ ဆရာတော်ကြိး၏ တပည့် ဒါယကာ ဒါယိကာမများနှင့် ဓမ္မကျေးဇူးရှိသူများ မည်သည်မဆို ကြွရောက်ကုသိုလ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
စပွန်ဆာ အလှူရှင်- ကိုရဲထွဋ်+မအေးသီတာ နှင့် ဆရာတော်ကြီး၏ တပည့် ဒကာ ဒကာမများ
Posted by yawcommunity at Tuesday, November 24, 20090comments Links to this post
ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ပူဇော်သောအနေဖြင့် ယနေ့ည (၂၅-၁၁-၂၀၀၉)မှ စ၍ ငါးညတိုင်တိုင် တရားပွဲများကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ညလျှင် ဆရာတော်နှစ်ပါးကျစီ တရားဟောကြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဘုန်းဘုန်း ဦးအဂ္ဂဝရမှ မိန့်တော်မူပါသည်။
Posted by yawcommunity at Wednesday, November 18, 20090comments Links to this post
မေတ္တာကမ္ဘာ လူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ စည်းရုံးရေးမှူး မနှင်းဟေမာhttp://hninhaymar.blogspot.com ရေးသားနှိုးဆော်မှုကို ပြန်လည် ဖော်ပြပါသည်။
စာနာထောက်ထားခြင်း၊ ဖေးမကူညီခြင်း၊ ငဲ့ညှာသနားခြင်း၊စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်း၊ရက်ရောပေးကမ်းခြင်း၊ ချီးမြှောက်ကယ်တင်ခြင်း ၊ ဂရုဏာထားခြင်း တည်းဟူသော မေတ္တာတရား၏ အနှစ်သာရ နှင့် ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများကို အခြေခံ၍
မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ အမျိုးဘာသာ သာသနာတော်အား တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ တတ်စွမ်းသလောက် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သွားရန်၊
့်နွမ်းပါးသော ကလေးငယ်လေးများ၏ အနာဂတ် ဘ၀အခြခိုင်မာမှုအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဖေးမသွားကြရန်..
ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ကြသော. မြန်မာပြည်သို့ အကူအညီပေးမည့် မေတ္တာကမ္ဘာလူမှုကူညီရေးအသင်း၏ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက်အလှူတော်ကို ( 21-09-2009) စင်္ကာပူစံတော်ချိန် နေ့လည် ၂နာရီတွင် ပြုလုပ်ပြီးစီးသော အသင်း၏ အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အမှန်တစ်ကယ် လိုအပ်လျှက်ရှိသော နေရာများထဲမှ အလိုအပ်ဆုံးနေရာလေးတစ်ခုအား လှူဒါန်းရန် အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်...။
အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်လှူဒါန်းနိုင်ရေးအတွက် စေတနာရှင် အလှူရှင်များ အနေဖြင့် ကျမ တို့ မေတ္တာကမ္ဘာလူမှုကူညီရေးအသင်း နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်လှူဒါန်းမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြရန် ကျမ မနှင်းဟေမာ ( စည်းရုံးရေးမှူး - စင်္ကာပူ ) မှ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံး၏ ကိုယ်စား အားလုံးသော ဘလော့ဂါ မောင်နှမများ ၊ မေတ္တာကမ္ဘာ အသင်းသားများ နှင့် စေတနာထက်သန်ကြသော အလှူရှင်များထံသို့ အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်....။
လာမည့်အောက်တိုဘာလကုန်မှ စတင်ပြီး ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လှူဒါန်းမည့်ကျောင်းဆောင်သစ်တွင် ကျောင်းအုပ်ရုံးခန်းအပါအ၀င် သူငယ်တန်းလေး၊ သူငယ်တန်းကြီး ၊ ပထမတန်း ၊ ဒုတိယတန်း ၊ တတိယတန်း ၊ ကလေးငယ်လေးများ အတွက် စာသင်ခန်း ၅ ခန်း ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်.....။ကျမတို့ ကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေအပေါ်တွင် မူတည်ပြီး စာသင်ဆောင်အနေအထားနှင့်ကလေးငယ်လေးများ သက်သာစွာ ပညာ သင်ယူနိုင်ရေးအတွက် စာရေးခုံလေးများပါ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်....။
“အစားအစာကို ပေးလှူတဲ့သူဟာ ခွန်အားကို ပေးလှူရာရောက်ပါတယ်၊
အ၀တ်အထည်ကို ပေးလှူတဲ့သူဟာ အဆင်းကို ပေးလှူရာရောက် ပါတယ်၊
ဆီမီးအလင်းရောင်ကို ပေးလှူတဲ့သူဟာ မျက်စိအမြင်ဓာတ်ကို ပေးလှူရာရောက်ပါတယ်၊
အိမ်ကျောင်း အဆောက်အအုံကို ပေးလှူတဲ့သူဟာ ကောင်းကျိုးအားလုံးကို ပေးလှူရာ ရောက်ပါတယ်” ........ လို့
ကျမတို့ရဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားဆုံးမတော် မူခဲ့တဲ့အတိုင်း အလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လှသော ကျောင်းအလှူတော်ကို အမှန်တစ်ကယ် ဖြည့်ဆည်းပေးရန်လဲ လိုအပ်နေသော နေရာလေးတစ်ခုကို မိမိတို့ချွေးနည်းစာများထဲမှ တက်နိုင်သလောက် ကူညီလှူဒါန်းကြပါရန် ကျမ၏ မောင်နှမ အားလုံးကို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ရှင်.....။
မေတ္တာကမ္ဘာအတွက် ပရဟိတများအတွက် စိတ်အားထက်သန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ အတွက် အသင်းမန်ဘာများရဲ့ ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။
Posted by yawcommunity at Wednesday, September 23, 20090comments Links to this post
ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့တချိန်တုန်းက စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၌ လျှပ်စစ်မီးအလင်းရောင် ကောင်းစွာမရသေး၊ သွားလမ်း လာလမ်း လည်း ကောင်းစွာမရှိသေး၊ တယ်လီဖုန်းအဆက်အသွယ်လည်း မရှိသေး၊ ဆေးရုံလည်း မရှိသေး။ ထိုကဲ့သို့သော အခါက သီတဂူဆရာတော်လောင်းလျာ ဦးပဉ္စင်းလေးသည် ၁၀-ဝါမျှသာ ရှိသေးသည်။ အနီးစခန်းဆရာတော်ထံ၌ အထက်တန်းပိဋကတ်စာပေနှင့် ဘာသန္တရစာပေများကို လေ့လာဆည်းပူးနေချိန် ဖြစ်ပေသည်။
မိုးတစိမ့် စိမ့်ရွာနေသည့် တစ်ခုသော နံနက်ခင်းဝယ် သီလရှင် ဆရာလေးတစ်ပါးသည် နံနက်ဆွမ်း ချက်ရန်အတွက် ထင်းပုံကို လက်နှင့် နှိုက်လိုက်ရာ အမှတ်မထင် မြွေဟောက်က ကိုက်လေ၏။ ဆရာလေးသည် အဆိပ်တက်ပြီး မေ့မျောလဲကျသွားလေတော့၏။ ချောင်ပိုင်သီလရှင် နာယကဆရာကြီးများ ပျာယာခတ်ပြီး ခြေ မကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ကုန်တော့၏။ ထို့ကြောင့် သီတဂူဆရာတော် အလောင်းအလျာ ဦးပဉ္စင်းလေးကို အကူအညီတောင်းပါတော့သည်။
ဦးပဉ္စင်းလေးကလည်း ချက်ချင်း လိုက်သွားပြီး မြွေကိုက်သည့်ဒဏ်ရာ၏အထက်၌ ခါးပန်းကြိုးနှင့် ချည်လိုက်၏။ ဒဏ်ရာကို ဓားနှင့်ခွဲပြီး သွေးကို ညှစ်ထုတ်လိုက်၏။ သံပရာသီးနှင့်ဆားကို ရော၍ ဒဏ်ရာကို သိပ်ပေးပြီး ဆရာလေးကိုလည်း ယင်းသံပရာသီးနှင့်ဆားကိုပင် ဖျော်၍ တိုက်လေ၏။
ထို့နောက် လူနာကို စောင်နှင့်ထုပ်ကာ မြင်းလှည်းဂိတ်သို့ ထမ်းပို့လိုက်ကြ၏။ မနက်အစောကြီး ဖြစ်သောကြောင့် မြင်းလှည်းသမားကိုလည်း အိမ်ထိ သွားခေါ်ရသေး၏။ ထိုမှတဖန် မြင်းလှည်းဖြင့် တောင်ရိုးမှ မိုးမလင်းမီ စစ်ကိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားကြရ၏။ မိုးလင်းသောအခါမှသာ ဆရာဝန်နှင့်သူနာပြုများ၏ ဆေးကုသမှုကို ခံယူရလေသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ ဆရာလေး အသက် ရှင်ခဲ့လေသည်။ အကယ်၍ ဒဏ်ရာသာ ပြင်းထန်လျှင် အသက်ရှင်သန်ဖို့မလွယ်ကူတော့။
ထိုအခက်ခဲတို့တွေ့ရခြင်းမှာ တောင်ရိုး၌ ဆေးရုံမရှိခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ ဆေးရုံရှိလျှင် အလွယ် တကူ ဆေးကုသနိုင်ပါသည်။ ``တောင်ရိုးမှာ ဆေးရုံရှိသင့်တယ်´´ဟု စိတ်ထဲ၌ တွေးမိလေသည်။ ဤကား ဆေးရုံဆောက်လုပ် ရန်စိတ်ကူး၏ ပထမဆုံး အကြံဖြစ်၏။
သီတဂူဆရာတော်သည် စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး သဒ္ဓမ္မသီတဂူချောင်ကို ၁၃၃၈-ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ သည်။ နှစ်စဉ် တော်သလင်းလတွင် ကျင်းပသည့် မန္တလေးမြို့ မလွန်ဆန်လှူရေစက်ချပွဲသို့ မြန်မာပြည်တဝှမ်း မလွန် ဆန်လှူ အသင်းထောက်များမှ တချို့အသင်းဝင်လူများသည် ထိုသီတဂူချောင်သို့ လာရောက် တည်းခိုကြ၏။
ဧရာဝတီတိုင်း မလွန်ဆန်လှူအသင်းထောက်တစ်ခုမှ ဆွမ်းဆန်အလှူရှင် ဒကာကြီးတစ်ယောက်သည် တစ်ညတွင် ဝမ်းလျှောလေ၏။ ဝမ်းအကြိမ်ပေါင်း ၂၇- ကြိမ်သွားလေသည်။ ထို့ကြောင့် သီတဂူဆရာတော်သည် ထိုလူနာကို ရေနွေးပူပူ ပျားရည်ချိုချို နှမ်းဆီမွှေးမွှေး ပတ္တမြားသွေးဆေးတို့ဖြင့်် ရော၍တိုက်လေသည်။ ထိုက် သလောက် သက်သာသွားလေ၏။
သို့သော် လူနာကို စိတ်မချသဖြင့် ညဉ့်နက်သန်းခေါင် အချိန်ကြီး၌ စစ်ကိုင်းဆေးရုံသို့ မြင်းလှည်း ဖြင့် ပို့လိုက်လေသည်။ လူနာ အသက်ချမ်းသာရာ ရဖို့အတွက် အပြေးအလွှား စိတ်မောကိုယ်မောဖြင့် ခက်ရာ ခက်ဆစ်ပို့ရ၏။ ယင်းသို့ပို့ရခြင်းမှာ တောင်ရိုးမှာ ဆေးရုံမရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ``တောင်ရိုး မှာ ဆေးရုံရှိလျှင် ကောင်းမှာပဲ´´ဒုတိယမ္ပိ အကြံဖြစ်မိပြန်ပါသည်။
သီတဂူဆရာတော်သည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ်းခမ်းမြို့သို့ ရောက်ခဲ့စဉ်က အမေရိကန်နိုင်ငံသား ခရစ်ယာန်သာသနာပြု ဒေါက်တာဆီးဂရေး၏ ဆေးရုံကြီးကို တွေ့ခဲ့ရသဖြင့် တအံ့တဩ ငေးမောကြည့်ရှုခဲ့ရ ပေသည်။ ``ငါတို့နိုင်ငံမှာ ဘာသာခြားဆေးရုံတွေ ရှိနေပြီး ငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာပိုင်ဆေးရုံမရှိတာဟာ ငါတို့ ရဟန်းတော်များရဲ့ အားနည်းချက်ပဲ´´ဟု စဉ်းစားမိခဲ့ပါသည်။
သီတဂူဆရာတော်သည် အူကျရောဂါဖြစ်သဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရာမကရစ်ရှနားအသင်းပိုင် ဂန္ဓီဆေးရုံသို့ တက်ရောက်၍ ကုခဲ့ရသေးသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော် တစ်ပါးအနေဖြင့် ဘာသာခြားများ၏ ဆေးရုံ၌ တက်ရောက်၍ ကုရခြင်းမှာ အမျိုး ဘာသာ သာသနာမျက်စိဖြင့် ကြည့်လျှင် အောက်တန်းကျ လှပေသည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာနေ၍ ဘာသာခြားပိုင်ဆေးရုံမှာတက်ရသည်မှာ တွေးကြည့်လေ ရှက်စရာကောင်း လေပင်တည်း။
ထို့ကြောင့် ``ငါတို့နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓသားတော် ရဟန်းတော်များ ဦးစီးတဲ့ ဆေးရုံရှိသင့်တယ်၊ ငါ စွမ်းနိုင်တဲ့ တနေ့ကျရင် ဆေးရုံဆောက်မည်´´ဟူသော ခိုင်မာသော အဓိဋ္ဌာန် ချလိုက်မိပါသည်။
ဘာသာခြားများ ပိုင်ဆိုင်သည့် ထိုဆီးဂရေးဆေးရုံနှင့် ဂန္ဓီဆေးရုံတို့က သီတဂူဆရာတော်ကို သီတဂူ အာယုဒါနဆေးရုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် မဖြစ်ဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။ ယင်းသို့ တိုက်တွန်း ခဲ့သော ကြောင့် သီတဂူဆရာတော်သည် အခက်အခဲပေါင်းများစွာကို ကျော်လွှားပြီး သီတဂူအာယုဒါနဆေးရုံကို ၁၃၅၀-ခုနှစ်တွင် ပန္နက်ရိုက်၍ ၁၃၅၁-ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။
ယနေ့အချိန်၌ သီတဂူဆေးရုံသည် ရဟန်း, သာမဏေ, သူတော်, သီလရှင်, ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူအများ၏ အားကိုးရာဖြစ်၍ နေပေတော့သည်။ မန္တလေးမြို့မှ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကလည်း နေ့စဉ် လုပ်အားဒါန ပြုလုပ်၍ ကုသပေးလျက် ရှိပေသည်။ သဒ္ဓါတရားကောင်းလှသည့် ထိုဆရာဝန်များကလည်း ဘုရားလက်ထက်က သမားတော်ကြီး ဆရာဇီဝကကို အားကျအတုယူဟန်ရှိလေ၏။
ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကလည်း ဤဆေးရုံကြီးသို့ လာရောက်၍ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း လုပ်အားဒါနပြုနေကြပါသည်။ ဆေးရုံအုပ်, ဆရာဝန်, သူနာပြု ဝန်ထမ်းပေါင်း ၇၀-ကျော်တို့က နေ့စဉ် အတွင်းလူနာ ၈၀-ခန့်၊ အပြင်လူနာ ၂၀ဝ-ခန့်တို့ကို ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။ အထူးသဖြင့် သီတဂူ အာယုဒါနဆေးရုံတော်မှ မျက်စိအလင်း ရရှိသူပေါင်း ၁၅၀ဝ-ခန့် ရှိသွားပေပြီ။
ယခုအချိန်၌ ဆေးရုံ၏ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်မှာ တစ်လလျှင် ပျမ်းမျှ ကျပ်သိန်း ၇၀-ကျော် ဝန်းကျင် ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှ အလှူရှင်များ၊ ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှ အလှူရှင်များက စေတနာထက်သန်စွာ လှူ ဒါန်းလျက်ရှိပေသည်။
(၂၄ - ၀၈ - ၂၀၀၉)
Posted by yawcommunity at Monday, August 24, 20090comments Links to this post
နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော် (သို့) အနာဂတ်ပန်းလေးများ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ (၂)
မေတ္တာကမ္ဘာ လူမှုကူညီရေး အသင်းရဲ့ ပထမ ဦးဆုံး အလှူအဖြစ် လှည်းကူးမြို့နယ် ရဲမွန်မြို့ ရဲမွန်တပ်ဦး ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းမှာ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့ လီတာ တစ်ထောင်ဆန့် ရေသန့်စက်ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်၊ မြန်မာကျပ်ငွေ ရှစ်သိန်း ငါးသောင်းတန်ဖိုးရှိ သောက်ရေသန့်စက်ကို မေတ္တာကမ္ဘာ လူမှုကူညီရေး အသင်းက စေတနာအပြည့် မေတ္တာဖြည့်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်လို့ မန်ဘာများ အလှူရှင်များနဲ့ ဓမ္မချစ်ခင် သူတော်စင်တို့ ၀မ်းမြောက်နုမော် သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန် မေတ္တာကမ္ဘာ လူမှုကူညီရေး အသင်းက မျှဝေအပ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်ပေါင်း တစ်ရာကျော်ရဲ့ အသိဥာဏ်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အမှန်တကယ်လည်း လိုအပ်နေတဲ့ နေရာလေးမှာ ကူညီခွင့်ရလို့ တကယ့်ကို ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်၊ မေတ္တာကမ္ဘာရဲ့ ကူညီမှုဟာ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ဒေသစွဲ ဆရာစွဲ ဂိုဏ်းစွဲမပါဘဲ မွန်မြတ်တဲ့ စေတနာနဲ့ ကူညီခဲ့တာမို့ ဒီကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဟာ မွန်မြတ်သန့်စင်ပြီး အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းအေးမှုကို လျင်မြန် လွယ်ကူစွာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေတ္တာကမ္ဘာ လူမှုကူညီရေး အသင်း ပုံမှန် လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက်လည်း အလှူရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်. လက်တွေ့ကျတဲ့ မေတ္တာနှလုံးသားကို အတူတကွ ဖော်ဆောင်ကြပါစို့။ အလှူရှင်များ အနေဖြင့်လည်း မေတ္တာကမ္ဘာ လူမှုကူညီရေး အသင်းကို ပါဝင် လှူဒါန်းလိုတယ်ဆိုရင် အောက်ပါ အီးမေးလ် ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ ။
Posted by yawcommunity at Sunday, August 02, 20090comments Links to this post
အနာဂတ် ပန်းလေးများ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ (၁)
Posted by yawcommunity at Friday, July 24, 20090comments Links to this post